Qaybaha Qaadista Kubadda
Bar bilow cusub iyo safar cusub oo loogu talagalay Meflle Bearings ee 2020
2020 waa sanad dadka laga qabsan doono iyagoo aan ilaalin. Fayras cusub oo taaj cusub ayaa adduunka oo dhan qaaday, dadkoo dhanna adduunka oo dhan waxaa hareeyay baqdin, sahay yaraan, iyo shaqo la’aanta kadis ku noqotay dalal kala duwan. Xaaladaha jawigan xun, hogaamiyaasha Yandian T ...
Waxaa qoray admin on 20-09-01
Sidoo kale waxaa loo dhisay sidii kubbado saa'id ah, gawaarida gawaarida waxay leeyihiin xiriir qadka halkii ay ka xiriiri lahaayeen barta dhibcaha, iyaga oo awood u siinaya awood weyn iyo iska caabin naxdin leh. Rollers qudhoodu waxay ku yimaadaan dhowr qaab, kuwaas oo, cylindrical, spherical, tapered, iyo irbad. Saa'idka Roller Cylindrical maareeyaan o ...
Kubad qaadista caadiga ah waxay ka kooban tahay waddooyinka tartanka gudaha iyo dibedda, dhowr walxo goobeed oo ay kala soocaan side, iyo, badiyaa, gaashaammo iyo / ama shaabad loogu talagalay inay wasakhda banaanka uga soo baxaan oo dufanku u soo galaan. usheeda dhexe iyo tartanka dibedda ee lagu qabtay guriyeyn. ...
Yandian Town Linqing City Shandong Gobolka